शक एब्सर्बर, सीभी जोइन्ट, अटो आउटटर सीभी जोइन्ट, क्लच डिस्क - लामो हावा
ल Long्ग पवन समूह, मुख्यालय निing्बोमा, एक संयुक्त उद्यम हो जुन बहु उत्पादकहरू र ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा स्थापना गरिएको हो। हामी दुबै उत्पादन र आयात र निर्यात सेवामा पेशेवर छौं। हाम्रो समूहसँग शक अब्सोर्बर, बल जोइन्ट, रबर पार्ट्स, क्लच कभर, क्लच डिस्क, सीभीजेन्ट, सिलिन्डर्स, बेल्ट, पानी पम्प आदि उत्पादन गर्ने १० बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ। बजारले युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकालाई covers २०,००,००० भन्दा बढीको वार्षिक बिक्रीको साथ समेट्छ। आफ्नै ब्रान्डले LWT, SP, र UM समावेश गर्दछ मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया र अफ्रिकामा बजार मान्यताको उच्च डिग्री प्राप्त गर्‍यो।
टोयोटा क्यामरी ASV50 OEM C का लागि अटो पार्ट्स पानी पम्प
टोयोटा कोरोला AE को लागि अटो पार्ट्स शक अवशोषक ...
जापानी कार बाहिरी CV संयुक्त TO-04 ABS को साथ ...
ल्यान्ड क्रूजरका लागि अटो पार्ट्स क्लच कभर CT-104 ...
म्यानुअल क्लच कहिले परिवर्तन हुन्छ? हामी श ...
म्यानुअल ट्रान्समिशनको क्लच प्लेट उपभोग्य वस्तुहरूको हो। कारको प्रयोगको साथ, क्लच प्लेटले थोरै लगाउँदछ। जब पोशाक निश्चित डिग्रीमा पुग्छ, यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक पर्दछ। हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं ...
फ्ल्यास बिक्री No M को साथ अब उपलब्ध छ ...
यो वर्ष कोरोना भाइरसको कारण हामी सबैका लागि अत्यन्त गाह्रो भएको छ। हामी आशा गर्छौं कि हामी बाँच्न र सफल हुन सँगै काम गर्न सक्दछौं। हामीले तपाईंको लागि चीन र दुबईको गोदामहरूमा प्रशस्त मात्रामा स्टक तयार गरेका छौं। यदि तपाईं म ...
१ १ टुक्रा MOQ, २ hours घण्टा डेलिभरी। २. दुबई र गुआंगझौमा प्रत्यक्ष बिक्री स्टोरहरू Big. ठूलो स्टक उपलब्धता 7.000०००+ भन्दा बढी फरक कोडहरूको साथ पूर्ण गम्भीर उत्पादन more. th निर्माणकर्ताहरूको अधिक एकीकरणको साथ एकीकरण ...
धन्यवाद तपाइँको समय को लागी